सीईओ–सञ्चालक झगडाले सनराइजमा हजारौंको निक्षेप र लगानी जोखिममा, ३ बजे बोर्ड बैठक| Corporate Nepal
सीईओ–सञ्चालक झगडाले सनराइजमा हजारौंको निक्षेप र लगानी जोखिममा, ३ बजे बोर्ड बैठक
काठमाडौं । सनराइज बैंकको सञ्चालक र सीईओबीचको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला आज (बिहिबार) ३ बजे आपतकालिन बोर्ड (सञ्चालक समिति)को बैठक बोलाइएको छ ।
बोर्ड र सीईओ दुबैका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको आजको बैठकमा सीईओ जनकराज शर्मा पौड्याललाई राख्ने कि निकाल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहने स्रोतको भनाई छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड सीईओ पौड्याललाई जोगाउन लागेका छन् भने अरु सञ्चालकहरु राख्नै नहुने पक्षमा छन् ।
बैंकका गुटबन्दी गरेको, सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै सञ्चालक समितिले तीन दिने स्पष्टिकरण सोधे पनि सीईओ पौड्यालले स्पष्टिकरण दिन मानेका छैनन् । उल्टै अर्थमन्त्रीदेखि बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्षलाई फोन गरेर आफूलाई थमौती गर्न प्रयासमा लागेको स्रोतको भनाई छ ।
चर्को दबाबका कारण अध्यक्ष दुगडले आज ३ बजेलाई बोर्ड बैठक बोलाएका हुन् । बोर्डले कस्तो निर्णय गर्ने हो ? भन्नेबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । अर्थमन्त्रीसमेतको दबाबका कारण सीईओलाई कारवाही गर्न दुई चार दिन ढिलो भए पनि नैतिकरुपमा उनले अब सीईओ बनेर बस्न नमिल्ने बैंक स्रोतको भनाई छ ।
सीईओ पौड्यालले भने आफूलाई सञ्चालक समितिले अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै गुनासो पोख्दै आएका छन् । सञ्चालक समितिले अधिकार कटौती गरेपछि अधिकारविहीन अवस्थामा रहेका पौड्याललाई बोर्ड बैठकमा समेत बोलाउन बन्द गरिएको छ । अध्यक्ष दुगड सीईओलाई बचाउने प्रयासमा रहे पनि सञ्चालकहरु मान्ने पक्षमा देखिन्न् ।
सञ्चालक समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नलेखेर सीईओ जनक शर्मा पौड्यालले उल्टै शक्ति केन्द्रमार्फत धम्काएपछि बैंकको आन्तरिक विवाद पेचिलो बनेको हो । अधिकांश सञ्चालकहरु एक हुँदा अध्यक्ष दुगड पनि बाध्य भएर उनीहरुलाई साथ लिएका छन् । सिंगो सञ्चालक समिति एकातिर र सीईओ पौड्याल अर्कातिर छन् ।
बहुमत सञ्चालकहरु सीईओ पौड्याललाई कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने पक्षमा छन् । उनीहरु आजै उनलाई बिदा गरेर नयाँ सीईओ नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । सीमित कर्मचारीहरुको गुटबन्दी गरेर काम गर्ने उनको शैलीले बैंक झन धरासायी हुने उनीहरुको तर्क देखिन्छ । तर, नहटाउन चर्को दबाब परेकाले कारवाही केही दिन तामेलीमा राख्ने संभावना रहेको स्रोतको भनाई छ ।
पौड्याललाई आत्मालोचना सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न मौका दिने, स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो आयो भने थमौती गर्न सकिने स्रोतको भनाई छ ।
सीईओ पक्षले भने आफूहरुले सञ्चालकविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेको र सोही उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई साइजमा ल्याउन आफूहरु लागिरहेको बताएको छ । बैंकका एक वरिष्ठ कर्मचारीले सीईओविरुद्ध लाग्ने सञ्चालकहरुविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी दर्ता भइसकेको र त्यसमा अन्य बैंकका केही सञ्चालकहरुले समेत सुझाव साथ दिएको बताएका छन् ।
आजको बोर्ड बैठकबाट विज्ञ सञ्चालक ओमकृष्ण जोशीलाई राजीनामा गराउने प्रयासमा सीईओ पौड्याल लागेका छन् । ‘सीईओले राम्रो शक्ति सञ्चय गरेको देखिन्छ, सञ्चालकहरुलाई बिजनेश र अन्य थ्रेट दिएर पछि हट्न बाध्य पार्ने सम्भावना बढेको छ’, सनराइज बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।
सञ्चालकमाथि नैतिक प्रश्न
सीईओले राम्रो काम नगरेको भन्दै ६ बुँदे आरोपपत्र दर्ता गराउने पाँच जना सञ्चालक र त्यसकै आधारमा स्पष्टिकरण सोध्ने सञ्चालक समितिमाथि अहिले नैतिक प्रश्न उठेको छ । तपाईंलाई किन नहटाउने ? भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिएपछि बाहिरी दबाबकै कारण सीईओ नहटाउन सञ्चालक समितिमाथि ठूलो नैतिक दबाब बढेको हो ।
‘हिम्मत भए हटाएर देखाउनुस्’ भन्दै ठाडै चुनौती दिने सीईओलाई के आधारमा पुनः थमौति दिने ? भन्ने प्रश्नले सञ्चालकहरुलाई अहिले पोलिरहेको छ । सञ्चालक समितिलाई विश्वासमा लिएर सीईओले काम गर्ने कि सीईओले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रण गर्ने ? यतिबेला प्रश्न उठेको छ ।
करार सम्झौताअनुसार जागिर खान आएका एक जना कर्मचारी र लगानीकर्ताहरुको हकहितको रक्षा गर्छौं भन्दै उनीहरुको प्रतिनिधि भएर आएका सञ्चालकबीच जोडिनै नसक्नेगरी सम्वन्ध चिरा परेको छ । लाखौं लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुलाई एक जना कर्मचारीले तह लगाएको सन्देश जाने गरि पौड्याललाई निरन्तरता दिँदा गलत सन्देश जाने स्रोतको भनाई छ ।
यता अरु बैंकका सीईओहरु पौड्याललाई नजोगाउने हो भने त्यो काल आफ्नोतिर
पनि पल्किनेसक्ने चिन्तामा छन् । तर, सीईओले शक्ति केन्द्रहरुलाई भन्न लगाएर आफूलाई निरन्तरता दिन खोज्ने कुराले त्यो बैंक कति दिन चल्छ ? भन्ने प्रश्न बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन्छ । मन अमिलो गरेर सीईओ पौड्यालले बाँकी लामो समय कसरी काम गर्न सक्छन् र ? उनको प्रश्न छ ।
पौड्याललाई सनराइज छोड्न साथीहरुको सुझाव
सीईओ पौड्यालसँग नजिक रहेका उनका सहपाठीहरुले पनि पौड्याललाई बैंक छोड्न सुझाव दिएका छन् । उनीसँग नजिक रहेका अधिकांश सीईओहरुले सञ्चालकसँग झगडा गरेपछि बैंकमा बस्न नसकिने भएकाले राजीनामा गर्न सुझाव दिएका हुन् । मिल्छ भने एकाध महिना जागिर खाने, नभए अहिले नै राजीनामा दिँदा राम्रो हुने पौड्यालका हितौषी एक सीईओले बताए ।
अधिकार सबै कटौती
शक्ति केन्द्रमार्फत सीईओ पद थमौति सफल भएकै खण्डमा पनि पौड्यालका पखेँटा काटेरै छोड्ने निचोडमा सञ्चालकहरु पुगेका छन् । अहिले पनि पौड्यालले जम्मा ४ करोड ५० लाख देखि ५ करोड रुपियाँसम्मका ऋणका फाइल मात्रै हेर्ने अधिकार पाएका छन् । तर, त्यसरी फाइल तयार हुँदा उनको अख्तियारी क्षेत्रमै नपार्ने गरिएको छ । या त तलबाटै स्वीकृत हुनेगरी साढे चार करोड भन्दा साना फाइल तयार हुन्छन् नभए सञ्चालक समितिमा पठाउने गरि पाँच करोड भन्दा ठूला फाइल तयार हुने गरेका छन् ।
‘अफिस आउने फेसबुक चलाउने घर जाने गरि सर्तमा मात्रै पैड्यालको पद कायम रहन सक्छ’, स्रोतले भन्यो ।
बैंकबाट अठ्ठाइस हजार ६ सय ८७ जना युवाले पाए ६ अर्ब एक करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा
फोनपेले पायो ‘पीसीआइ डिएसएस भिथ्रिटुवान’, सबै प्रकारका कारोबार सुरक्षित रहेको प्रमाणित
आगामी आवदेखि ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन, नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन
संकटको आर्थिक अस्त्र डिजिटल कारोबारः महामारीको बाध्यताले प्रभावकारी
बैशाख ९, २०७७ मंगलबार
बैशाख ४, २०७७ बिहिबार
नागरिक लगानी कोषका सेवाग्राहीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइने
भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी अन्योलमा
मजदूरको दैनिक ज्याला रु. १०० बढ्यो, अब रु. ९०० पाउने
सुनको मूल्य लगातार उकालो, आज पनि प्रतितोला ११ सय रुपियाँ बढ्यो